Vazaha maty voatifitra teny Ilafy: jiolahy efatra voasambotry ny UIR | NewsMada
Vazaha maty voatifitra teny Ilafy: jiolahy efatra voasambotry ny UIR
Par Taratra sur 22/10/2018
Maty tsy tra-drano notifirin’ny jiolahy ity vazaha teratany frantsay teny Ilafy. Fito lahy ireo nanafika ary nirongo basy. Tsy ela taorian’izay, tratran’ny polisy kosa ny efa-dahy tamin’ireo…
Manodidina ny tamin’ny 12 ora alina, ny zoma teo, nisy andian-jiolahy mirongo basy nanafika ny tokantranon’ny tale jeneralin’ny orinasa “zone franche Festival”, teny Ilafy. Notifirin’ireo jiolahy ilay vazaha ka maty tsy tra-drano. Entana maro no lasan’ireo olon-dratsy ary vola mitentina 2 tapitrisa ariary. Nitsoaka ireo jiolahy, saingy vetivety ihany ny antso vonjy ka nanenjika ny polisin’Avaradrano sy ny UIR .
Efa-dahy tamin’ireo fito voalaza fa nanafika no voasambotry ny polisy. Araka ny fanazavan’ny mpitandro filaminana, andian-jiolahy efa ifampitadiavana mihitsy ity nanafika teny Ilafy ity ary anisan’izany i Rasoka, izay efa voatontonona tamin’ny fanafihana fara fahakeliny efatra tao amin’ny kaomisaria foibe an’Avaradrano.
Izany hoe andian-jiolahy mpanafika amin’iny faritra iny ireto jiolahy ireto. Nisy telo lahy tafatsoaka, ka heverina fa mety hahitana ny momba azy ireo iretsy telo lahy voasambotra. Mitaraina hatrany ny olona amin’ny fanafihan-jiolahy miseho lany amin’ny faritra manodidina an-Antananarivo, amin’ireo somary ambanivohitra. “Efa mandry tsy lavo loha amin’ny alina. Zara fa matory ary mitaintain-dava. Na misy mpiambina aza anefa, tsy mahasakana ny jiolahy izany noho izy ireo manana basy”, hoy ny filazan’ny olona.
Miandry vokatra tsara ny vahoaka amin’ny ity tsy fandriampahalemana ity. Manao ezaka ny tompon’andraikitra entina miady amin’izany, saingy hita fa tsy ampy izany. Amin’ity teratany frantsay maty ity, mety hisy fiantraikany amin’ny resaka diplaomasia indray izy io, indrindra amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Anisan’ny fotoana mampirongatra ny asan-jiolahy rahateo izao.
Eo ihany koa ny momba ny basy eny am-pelatanan’ny olon-dratsy. Maro ihany ireo basy tratra nopotehina teny Analakely ireo, saingy tsy mampihena ny fanafihan-jiolahy mitam-piadiana izany. Sarotra ihany koa ny famongorana izany, izay mahalasa saina ihany ny fomba ahatongavan’ireny eny amin’ny jiolahy.